ယရှေုသညျသဲထဲတွင်ရေးသားခဲ့သည်ဘာလဲ? | Apg29
သမ်မာကမျြးသညျယရှေုမြေ၌ရေးသားခဲ့သည်ရှိရာတယျ (ကမြေပြင်, မသဲသည်), ငါတို့သည်မျောက်မထားသောမိန်းမများ၏ဇာတ်လမ်းရှာတွေ့ဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအားဖြင့်ကျောက်ခဲနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ယောဟနျသ 8: 6-8 ။ ဒါကသူတို့ကသူ့ကိုသွေးဆောင်ကလည်း, သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုအောက်သို့ငုံ့ခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်လက်ညှိုးနှင့်ရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့ရပ်နှင့်သူ့ကိုမေးတဲ့အခါ 7, သူထ said: "။ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူသည်သူမ၏မှာပထမဦးဆုံးသောကျောက်ချပစ်စေခြင်းငှါ" 8 ထိုအခါသူကအောက်သို့ငုံ့ခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ယောဟနျသ 8: 2-11
နံနက်စောစောဗိမာန်တော်ဆိုဒ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ လူများအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုန်းကျင်ကိုစုဝေးစေ, သူသည်ထိုင်သူတို့ကိုသင်ပေးတယ်။3ထိုအခါကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့ဖောက်ပြန်အတွက်သိမ်းယူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့4များ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏ထားကပြောသည် "ဟုသူမကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်သည့်အခါအရှင်ဘုရား, ဤမိန်းမသည်လုပ်ရပ်အတွက်ဖမ်းမိခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပဒေသည်မောရှေ5ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားတော်မူခဲ့သည်။ သငျသညျအဘယျသို့ဆိုကြသနည်း"6ဤသူတို့သူ့ကိုသွေးဆောင်ကလည်း, သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုအောက်သို့ငုံ့ခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်လက်ညှိုးနှင့်ရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့ရပ်နှင့်သူ့ကိုမေးတဲ့အခါ 7, သူထ said: "။ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူသည်သူမ၏မှာပထမဦးဆုံးသောကျောက်ချပစ်စေခြင်းငှါ" 8 ထိုအခါသူအောက်သို့ငုံ့ခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။သူတို့ကကြားလျှင် 9, သူတို့က, ဝေးတစျခု, ပထမဦးဆုံးအကွီးအကဲမြားအားဖြင့်တဦးတည်း ဝင်. , ထိုအရပ်၌ရပ်နေသောထိုမိန်းမသည်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ 10 ယရှေုကိုတက်ဖြောင့်ခြင်းနှင့်ထိုမိန်းမအားဆိုပါတယ် "သူတို့? ဘယ်သူမျှသင့်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ဖူးတဲ့မိနျးမ,?" 11 သူမက "မမ, သခင်" လို့ပြန်ဖြေတယ်။ ယရှေု, "ဟုမငါသည်သင်တို့ကိုအပြစ် တင်. ကြဘူး။ Go ကိုနောက်တဖန်အပြစ်ဖြေရာ!"
ဤသည်ဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအမှုကိုပြု၏။ သူတို့ကမပေးသညျယရှေုသရုပ်ပြ mistook ။
သူတို့သညျယရှေုကဆိုပါတယ်သောအရာကိုကြားသိနှင့်သူ၏သရုပ်ပြမြင်လျှင်, သူတို့သည်သူကိုဆိုလိုအတိအကျသိနိုင်အောင်။ သူတို့ဟာကမျြးစာကိုအတွင်းအပြင်နှင့်ထွက်နိုင်ကဘာသိသည်။
ထာဝရဘုရားက, ဣသရေလအမျိုး၏မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း။ သငျသညျအချည်းနှီးမှလာကြလိမ့်မည်ထွက်သွားသူမည်သူမဆို။ ငါ့ထံမှဝေးလဲကြသူများသည်သဲတစ်အရေးအသားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူတို့ကထာဝရဘုရား, လူနေမှုစမ်းရေကိုစွန့်ကြပြီ။
ယေရမိက 17:13 အားဖြင့်မှတ်ချက်
သခင်ဘုရားအဖြစ်ရုံဣသရေလအမျိုး၏မြော်လင့်ခြင်း, သူသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအနာဂတျနှင့်တစ်ဦးမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်, သငျသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိရှိသည်။ သငျသညျကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်အဲဒါကိုသိပ်နောက်ကျမယ့်ရှေ့တော်၌ယရှေုသညျပွုပါမညျ။
ရှည်လျားသငျသညျအသကျရှငျသကဲ့သို့သညျယရှေုကိုမှီဝဲ။ ထိုအခါသင်တဦးတည်းနေ့၌သင်တို့အားငါအိမ်ပြန်ကောင်းကင်သို့ရောက်လာသောအခါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်သူ့ကိုစွန့်ခွာ, သင်အရှက်ကွဲလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်လိုလား?
ဤသည်မှာလည်းယေရှုဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်ဖို့သရုပ်ပြထားတဲ့ဒီကဗျာနှင့်မယှဉ်နိုင်တဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသောကျောက်ဖို့မျောက်မထားသောမိန်းမကခြိမ်းခြောက်လာသောအခါသူတို့ကယေရမိ 17:13 ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဘာကောင်းစွာသိလို့ယရှေု, သဲ၌ရေးသားခဲ့ရာချက်ချင်းသိနားလည်ကြ၏။ သခင်ဘုရားကိုစွန့်ခွာဖို့ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။ သဲ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သောအရေးအသားလေတိုက်နှင့်ရေအားဖြင့်ဖျက်လိမ့်မည်။
ယရှေုသညျအသက်ရေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် su သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ထာဝရအသက်ကိုခံယူသူ့ကိုလက်ခံ။ ဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုစွန့်လွှတ်။ သူတို့ကယေရမိကို 17:13 အညီနေထိုင်နေရေအရင်းအမြစ်စွန့်ပစ်, ပြီးတော့မျှထာဝရအသက်မခဲ့လေသည်။